Sonos waxay soo saartay Amp, nidaam awood u siinaya qalabkaaga | Wararka IPhone
Sonos Waa saxeex guud oo ka dhexjirta isticmaalayaasha aadka u adag ee shirkadda Cupertino, isku ekaanshaha heerka naqshadeynta iyo gaar ahaan heerarka tayada ayaa ka dhigay shirkadan maqalka inay noqotay meel lagu tilmaamo meelo badan. Taasi waa sababta intii lagu jiray IFA oo lagu qabtay Berlin ma seegi karo kii ugu dambeeyay ee nimankan.
Xaaladdan oo kale, qalab kale oo la jaan qaadaya AirPlay 2 ayaa imanaya (waxaan dhawaan ka wada hadalnay Sonos Beam). Tani waa sida Sonos uu noo tusayo Amp, oo ah qalab isku dheelitiran, oo loogu talagalay faahfaahin dheeri ah taasna kor u qaadaysa isku xirnaanta.
Sida qalabka kor ku xusan, tan Sonos Amp wuxuu leeyahay HDMI ARC taas oo noo oggolaan doonta, iyo waxyaabo kale, inaan si hufan ula falgalno telefishankeenna. Waxay sidaas ku bixisaa ilaa 125 W kanaal kasta oo leh kan adag, oo leh ugu badnaan afarta ku hadla ee isku xiran, tan waxay u bixisaa HDMI isku xirnaanta. Si kastaba ha noqotee, iyo ka hor intaadan sii wadin aqrinta, waa inaan cagahaaga joojiyaa ... Qalabkan lagama heli doono dukaanka illaa bisha Febraayo ee sannadka soo socda wuxuuna ku kacayaa ugu yaraan 599 euro, in kasta oo aysan ahayn qiimo aad loola yaabo waxa Sonos na haysatay.
HDMI-keeda iyo dekedaha khadka tooska ah waxay u oggolaanayaan telefishinnadaada, ujawaabyadaada, beddelayaasha CD-ga iyo qeybaha kale ee maqalka inay si fudud ula xiriiraan Amp oo ay qayb ka noqdaan nidaamka Sonos. Sida had iyo jeer, Sonos aad buu uga badan yahay hadalka, isku xirnaanshaheeda ficil ahaan malahan wax xadidaad ah waxayna naga dhigeysaa ku dhawaad ​​balwad leh inaan isticmaalno. Waxaan si aad ah ugu fiirsan doonnaa bilaabista rasmiga ah ee Amp ee Isbaanishka, waxaan hubaal ahaan u awoodi doonnaa inaan tijaabino si aan kuu siino fikradeena ugu daacadsan sidii aan horeyba ugu qabannay munaasabadaha kale aaladaha caanka ah ee isla sumadda ah. Dhanka kale, codka ugufiican ee lasocda aaladda macruufka ah wuxuu had iyo jeer kujiraa wararka halkan, ee kujira iPhone News.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Sonos wuxuu bilaabayaa Amp, nidaam awood u siinaya qalabkaaga ugu badnaan